‘न बिर्से तिमीलाई’को नयाँ भर्सनका बारेमा अन्जु पन्तले के भनिन ? – Pahilo Page
‘न बिर्से तिमीलाई’को नयाँ भर्सनका बारेमा अन्जु पन्तले के भनिन ?
२६ माघ २०७८, बुधबार १०:५० 86 पटक हेरिएको
काठमाडौं। गायिका रचना रिमालको स्वरमा चर्चित गजल ‘न बिर्से तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई’ को ‘नयाँ भर्सन’ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न आलोचना भइरहेको छ।
विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला सो गजलकी ओरिजिनिल गायिका अन्जु पन्तले पनि मुख खोलकी छन् । नयाँ भर्सन आउनु खुसीकै कुरा भए पनि यसअघिका गायक/गायिकाको नामै उल्लेख नगरी अफिसियल भनेर सार्वजनिक गरिनु दुखद् र अन्यायपूर्ण भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेकी छन।
मेरा सम्पूर्ण श्रोता,दर्शक तथा शुभचिन्तकमा अभिवादन
अहिले नयाँ भर्सनमा गायिका रचना रिमालको स्वरमा रेकर्ड भएछ । मेरी छोरी समान कि रचना नानु लगायत सबै नवआगन्तुक कलाकारप्रति सधैँ स्वागत, आशिर्वाद र धेरै माया छ र रहिरहने छ ।
उही संगीत उही एरेन्जमेन्ट नयाँ भर्सनमा ओरिजीनल गायक गायिकाको नाम समेत उल्लेख नगरी, अफिसियल भनेर सार्वजानिक हुनु चाँही दुखद र अन्यायपूर्ण कुरा हो । के र कुन उद्देश्यका लागि यस्तो भयो, मलाइ थाहा भएन । म एक ब्यक्तिको कुरा भन्दा पनि यो चलनले भोलीका दिनमा संगीत र कलाकारलाई दिने सम्मान र आदरको संस्कार नै पो भुल्न लागिरहेका छैनौ भन्ने चिन्ता लागेको छ । आशा छ सम्बन्धित पक्षले यो विषयलाई अनावश्यक विवाद र चर्चा गरिरहनु भन्दा दर्शक श्रोताको माग अनुसार समाधानको उपाय निकाल्नु हुनेछ । भविश्यमा कोही पनि कलाकार अपमानित र अन्यायमा परेको अनुभुति गर्ने दिन कहिल्यै नआओस् ।